नेताहरुलाई जनताले अब विश्वास गर्लान् ? – eSajha News
नेताहरुलाई जनताले अब विश्वास गर्लान् ?
प्रकाशित मिति: १४ माघ २०७७, बुधबार ०७:४१
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा उत्पन्न आपसी वैमनष्यतापछि अहिले ओली (संस्थापन) समूह र दाहाल–नेपाल समुहमा विभक्त भएको अवस्था छ । नेकपाबाट विभाजित समूह यतिबेला एकअर्काको खोइरो खन्नमै तल्लीन छन् । चुनावताका वाम गठबन्धन गरेर दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरी जनताको विश्वास हासिल गरेको ‘डबल नेकपा’ अहिले एकअर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप लगाउँदै जनताको विश्वास पुनः आफूतर्फ खिच्न प्रयासरत रहेका छन्, तर उनीहरूको यस्तो हर्कतका कारण जनता भने नेकपाबाट झन् विकर्षित र निराश बन्ने परिस्थिति बनिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सत्तासीन पार्टीबाटै विभाजित भएर एउटा तप्काले सरकारकै खोइरो खनिरहेका छन् । यस्तै, अन्य दलका नेता–कार्यकर्ताहरू पनि सरकारको यो कदमप्रति असहमत हुँदै विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । यही बहानामा जनतामा आफूप्रति विश्वास जगाउने उनीहरूको प्रयत्न रहेको पाइन्छ । तर, सचेत जनता अब दलहरूको झुटो बाचाको लहरमा तरङ्गित नहुने माहोल पैदा भएको छ । राजनैतिक दलहरूले वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने भन्दै जनतालाई पटक–पटक धोका दिँदै आएका छन् । विघटनविरुद्ध आन्दोलन गर्न जनता उक्साउने मकसद पनि भ्रमको एउटा पाटो भएकोले दलहरूको यो प्रयास अब सहजै सफल नहुने निश्चित नै छ ।
आन्दोलन भन्दै दिनहुँ माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन भइरहेको देखिन्छ । आफ्नो शक्ति प्रदर्शनको लागि जनतालाई हतियार बनाउने चेष्टा अझै भएका छन् र दलका कार्यकर्ताहरू अझै अन्ध भएर धेकेबाज नेताहरूको पिछलग्गु भएको पनि देखिएको छ । नेताहरूको बहाना बुझ्न नसक्नु या नेतालाई कुर्सी दिलाउनका निम्ति भ¥याङ बन्न अझै तयार रहनु दुर्भाग्य नै हो ।
प्रतिगमनविरूद्ध नेपाली काङ्ग्रेस, प्रचण्ड–माधव नेकपा र जसपाका नेताहरू जनप्रदर्शन गर्दैछन् भने ओलीबाट अलगिएका प्रचण्ड अहिले फेरि अरु राजनीतिक दलसँग मिल्न खोजिरहेका छन् । राजनीतिमा लामो समय सहकार्य गरेका प्रचण्ड–बाबुराम एकअर्काका प्रतिद्वन्द्वी समेत भएका थिए, तर अहिले फेरि ओलीसँग सहकार्य तोडेका प्रचण्ड बाबुरामसँग मिल्न खोज्दैछन् । जनयुद्धमा नेतृत्व तहमा रहेका प्रचण्ड र बाबुराम एकअर्काको प्रतिद्वन्द्वी हुँदै अहिले फेरि मिलनको बाटोमा लाग्ने सुर गरेबाट मुलुक कतै मुठभेड र अर्को खालको द्वन्द्वको चरणमा प्रवेश गर्दै त छैन भन्ने आशङ्का पैदा भएको छ ।
जुनसुकै राजनीतिक दल होस् अहिले सबै पदकै लागि लडिरहेका छन् भन्नेमा दुई मत छैन । पद हासिल गर्नका लागि जनतालाई विश्वास दिलाउन अर्थात् सोझै भन्नुपर्दा जनतालाई भ्रमित तुल्याउन हरेक दिन आन्दोलनको नौटङ्की गरिरहेका छन् । यसरी जनताको विश्वासमाथि घात गर्दै समृद्धिको सपना देखाएर जनतालाई बेवकुफ बनाउँदै आइरहेका राजनीतिक दलका नेताहरू कसैले पनि अहिलेसम्म जनहितका लागि काम गरेको भने पाइएको छैन । यो ठूलो विडम्बना हो ।
जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने राजनीतिक दल पदका लागि चुनाव र आन्दोलनका लागि मात्रै जनतालाई प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । यसर्थ अब नेपाली जनता सचेत हुन जरुरी छ । जुनसुकै राजनीतिक दलका नेता होस् उनीहरूले देखाइरहेको भ्रमको जालो बुझ्नु र च्यात्नु जरुरी छ । आन्दोलन र चुनावका लागि मात्रै प्रयोग गर्ने तर जनताको हकहितका लागि काम नगर्ने दलका नेताहरूको बकम्फुसे कुराहरूमा विश्वास नगरी जनहितका लागि काम गर्ने राजनीतिक दललाई रोज्नु अपरिहार्य छ ।
१४ माघ २०७७, बुधबार ०७:४१ मा प्रकाशित